Zimbabwe – three armed poachers killed in gunfight with rangers – Africa Sustainable Conservation News
Zimbabwe – three armed poachers killed in gunfight with rangers
Zimbabwe game rangers kill three poachers in gun fight:
One of three #poachers shot dead in Zimbabwe at the weekend was carrying a South African driver’s licence, a South African firearm licence, a South African private security company ID card, and an Economic Freedom Fighters political party membership card.
According to informed sources, two of the dead poachers were wanted after skipping bail on previous rhino poaching charges.
11:57, 07 APR 2019
The victims, Hardlife Mukombi, 44, Owiwi Oquingwi Vedbry Gotora and a third man yet to be identified, were intercepted after jumping over a fence at the Malilangwe Game Reserve, at around 3.45AM on Saturday.
Detectives from Chiredzi Police Station attended the scene. On examining Mukombi’s body, they found – inside a satchel – a Zimbabwean passport, soya chunks, an axe, loaf of bread, instant porridge and clothes. He also had a brown wallet containing a South African driver’s licence, a South African firearm licence, a South African private security company identity card, an Economic Freedom Fighters political party membership card and diazepam tablets.
Chiredzi poachersMalilangwe Game Reservepoachers killed in ZimbabweSouth African poacher killed in ZimbabweZimbabwe poaching
Previous Previous post: Kruger poacher death – Shame on those who rejoiced at the death of a rhino poacher, who was just a poor and desperate pawn of the mega-rich
Next Next post: Gabon – two elephant poachers arrested with military weapons